सत्तारोहणबारे कांग्रेस बैठकमा देउवाको ब्रिफिङ : गाह्रो छ, गाह्रो छ ! – Nepal Press
महन्थ मिलाउन कठिन, माधव नेपाल पक्षले राजीनामा नगरे झन् कठिन्
२०७८ वैशाख २८ गते २०:५७
जसपाको पूर्ण समर्थन नभए माधव पक्षका एमाले सांसदहरुको राजीनामा गराउने विकल्पबारे पनि देउवाले छलफल गरिरहेका छन् । बैठकपछि कांग्रेस सह महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जसपाको सबै पक्षलाई मनाउनेदेखि एमालेमा माधव पक्षको समर्थन लिनेसम्मको विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।
देउवा कन्फिडेन्ट देखिएनन्
आफ्नै पार्टीका नेताहरुसंगको छलफलमा सभापति देउवा कन्फिडेन्ट रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । नयाँ सरकारबारे माओवादी र जसपा नेतृत्वसंग भएको संवादका भित्री कुरा पनि देउवाले खोल्न चाहेनन् । बैठकमा सहभागि एक नेताले प्रधानमन्त्री बन्न तीव्र ईच्छा भएपनि देउवामा अनौठो भय देखिएको बताए ।
‘सत्ताको कुरा आउँदा देउवाजीको यति कमजोर प्रस्तुति मैले कहिल्यै देखेको थिइँन । सबैले सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ तर सबै कुरा खुलस्त गर्नुहुन्न’, ती नेताले नेपाल प्रेससंग भने । उनका अनुसार आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर भएको महसुस गरेपनि देउवाले स्वीकार्न सकेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्री बन्न गाह्रो परेको उहाँले थाहा पाइसक्नुभयो । तैपनि तलमाथि कसैसंग कुरा गरेर मिल्छ की भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ’, उनले भने ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार बेलुकी नौ बजेसम्मको समय दिएकी छिन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको भेटमा ठाकुर पक्षलाई पनि सहमत गराउने वचन दिएका छन् । यादवले वचन पूरा गरे पाँचौ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न सकिने आँकलनसहित देउवाले राजनीतिक संवादलाई तीव्रता दिएकै छन् ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २८ गते २०:५७